Tanàna tsara indrindra amin'ny taona 2020 ho an'ny Noely any Etazonia voatondro
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tanàna tsara indrindra amin'ny taona 2020 ho an'ny Noely any Etazonia voatondro
Miaraka amin'ny fankalazana ny Noely noteren'ny Covid-19 areti-mandoza fa ny fandaniana amin'ny fialantsasatra amin'ny ankapobeny antenaina hitombo raha oharina amin'ny 2019, namoaka tatitra momba ny toerana tsara indrindra amin'ny fankalazana ny Noely ny 2020.
Mba hamaritana ireo tanàna hanolotra fialan-tsasatra feno holalaovana na eo aza ny fihenan'ny areti-mifindra COVID-19, dia nampitahain'ny manam-pahaizana ny tanàna 100 lehibe indrindra any Etazonia miorina amin'ny tondro telo lehibe amin'ny Krismasy azo antoka sy mora vidy. Ny data napetraka dia manomboka amin'ny tranga COVID-15 ka hatramin'ny fahazoana ny fomba amam-panao Krismasy ka hatrany amin'ny fahalalahan-tananan'ny tanàna.
Tanàna tsara indrindra amin'ny Krismasy
Miami no be indrindra Fambolena hazo krismasy (isaky ny fakany iray an'ny mponina), 0.024851, izay 23.2 heny mihoatra ny any Indianapolis, ilay tanàna misy 0.001072 ny vitsy an'isa.
I Honolulu no manana ny vitsy indrindra Tranga COVID-19 tamin'ny herinandro lasa per capita, 1,591.53, izay 7.1 heny vitsy noho ny any Lubbock, Texas, ilay tanàna misy 11,275.64 betsaka indrindra.
Orlando, Florida, no manana ny betsaka mpivaro-mofo (isaky ny fakany iray an'ny mponina), 0.356257, izay 9.4 heny mihoatra ny Avaratra Las Vegas, Nevada, ilay tanàna misy vitsy indrindra amin'ny 0.037850.
Indianapolis no manana ny ambany indrindra vidin'ny divay antonony, $ 3.63, izay ambany ambany 4.1 raha oharina amin'ny Seattle, ilay tanàna misy $ 14.89 avo indrindra.
Seattle no be indrindra banky sakafo (isaky ny fakany iray an'ny mponina), 0.024190, izay 20.2 heny noho ny any Boston, tanàna misy vitsy an'isa amin'ny 0.001200.
UAE sy Saudi Arabia ny fanadihadiana manerantany momba ny fikasana hivezivezy any ivelany amin'ny 2021
Ny sidina COVID voasedra voalohany an'ny Delta dia miala ao Atlanta